ukucima, ukuqala kwakhona, okanye ukuseta kwakhona i-samsung galaxy s21
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ukucima, ukuqala kwakhona, okanye ukuseta kwakhona i-Samsung Galaxy S21
Ukucima, ukuqala kwakhona, okanye ukuseta kwakhona i-Samsung Galaxy S21
Ngeli xesha, Isamsung khange uhambise iipali kunye nezitshixo xa kufikwa kumba wokucima, ukuqala ngokutsha, okanye ukuseta kwakhona i-S21, S21 +, okanye i-S21 Ultra, njengoko ibingazange yakwenza kudala, kwaye yashiya qala kabusha ulandelelwano njengoko injalo kwinqaku lama-20 .
Amaqhosha asekhona kwicala lasekunene le- Uthotho lwe-S21 kodwa ukuba unayo nje ifowuni kwaye uyazibuza ukuba yeyiphi na combo ephambili ecima iS21 okanye ayibuyise kwakhona, nantsi iposi. I-Samsung Galaxy S21 Ultra $ 49999 $ 119999 Thenga kwi-Samsung Jonga ixabiso Thenga kwiAmazon $ 19999 $ 119999 Thenga kwiVerizon $ 39999 $ 119999 Thenga kwi-AT & T $ 49999 $ 119999 Thenga kwi-T-Mobile $ 114999 $ 119999 Thenga kwiBestBuy
Ndilayita / ndicima okanye ndiyiqalele njani i-Samsung Galaxy S21 yam?
Layita i-Galaxy S21
Cinezela kwaye ubambe iqhosha elisecaleni lamandla ukucima iGPS S21 yakho
Cima okanye qala i-Galaxy S21 kwakhona
Cinezela ivolumu phantsi kunye nezitshixo zamandla ngaxeshanye.
Zibambe de kube kucinyiwe / ukuqala ngokutsha / imo yongxamiseko kwimowudi yamaqhosha ebonakalayo kuvela.
Cofa kwi icon enkulu ebomvu kucinyiwe icon phezulu, okanye iqhosha eliluhlaza ukuqala kwakhona embindini.
Yiya kwiimpawu eziphambili> Isitshixo esecaleni> Ungayicima njani ifowuni yakho ngokhetho oluninzi.
I-Ditto yokuvula / ukucima, okanye ukuqala kwakhona i-Samsung Galaxy S21 Ultra okanye i-Galaxy S21 +. Ngenye indlela, ungaya kwiimpawu eziPhambili> Isitshixo esecaleni> Uyicima njani ifowuni yakho, kwaye ucwangcise ukucofa ixesha elide kwiqhosha elisecaleni ukubonisa imenyu yokuqalisa kwakhona, endaweni yokubiza iBixby.
Nzima ukuseta kwakhona i-Galaxy S21
Cinezela kwaye ubambe ivolumu phantsi kunye nezitshixo zamandla ngaphezulu kwemizuzwana eli-10
Hlela kwakhona i-Galaxy S21 kuseto olungagqibekanga lwasefektri
Useto> Ulawulo gabalala> Cwangcisa kwakhona> Seta useto lonke
Ukuba ufuna ukubuyisela i-Galaxy S21 Ultra yakho, eli nqaku liyicwangcisa kwakhona kuseto olungagqibekanga lwasefektri, gcina ukhuseleko, ulwimi kunye neeakhawunti, ngelixa ushiya idatha yobuqu ihambile. Galaxy (astronomy) ingqokelela yeenkqubo zeenkwenkwezi; nayiphi na enye yeebhiliyoni zeenkqubo nganye nganye ineenkwenkwezi ezininzi kunye ne-nebulae kunye nothuli (Iinkcazo, izithetha-ntonye, ​​inguqulelo)
IVerizon ikhupha uhlaziyo olukhulu lweSamsung Gear S3 yeklasikhi kunye nomda
Imiyalezo emnandi yokubuyisela imiyalezo yeSMS kwi-Android
Iingqungquthela ze-AT & T kwi-4G LTE kunye ne-5G kwiintengiso ezivela kwi-Boost ne-Xfinity
Ungalifumana phi elona xabiso liphezulu kwintengiso yakho ye-iPhone 6/7 okanye urhwebo ngaphakathi
Eyona fowuni zihamba phambili zeT-Mobile ngo-2021